Kedu ụzọ iji nweta backlinks dofollow n'efu ma dị irè?
Iji nweta backlinks dofollow dị ịrịba ama n'oge okwu njikarịcha search engine. Ha na-ebuli ike nke ebe nrụọrụ weebụ gị na nsonaazụ ọchụchọ. Onye ọ bụla maara na Google na-enye ndị ọzọ uru iji backlinks dofollow, na-ebufe ha okporo ụzọ na ibe weebụ.
E nwere ọtụtụ ndị ọhụrụ na ahịa dijitalụ ndị na-achọ ụzọ dị mfe ịmepụta njikọ na-abanye na ebe nrụọrụ weebụ ha - limitierte luxusuhren.Otú ọ dị, n'ebe niile ndị a jikọtara usoro ụlọ na-agbaso ụkpụrụ nduzi Google. N'ihi ya, ndị webmasters na-enweghị uche ga - enweta ihe ọ bụla gbasara okporo ụzọ na ọkwa ma ọ bụ nweta nkwado sitere na engines ọchụchọ.
N'isiokwu a, M ga-achọ ịkọrọ gị ụfọdụ ụzọ bara uru ma tụkwasị obi iji nweta backlinks dofollow ma bulie ọnọdụ gị na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ. Olileanya, usoro ụlọ ọrụ ndị a ga-enyere gị aka inwetakwu okporo ụzọ site na engines ọchụchọ.
Nke mbụ, ka anyị tụlee otú anyị nwere ike isi mata ọdịiche dị n'agbata dofollow na ala akwa backlinks.
Olee otu ị ga-esi lelee ụdị backlinks i nwere?
Ọ dị ịrịba ama ịmara ọdịiche dị n'etiti ụdị ndị a nke inbound njikọ dị ka ha nwere dị iche iche uru n'ihi na a search engine njikarịcha.
njikọ Dofollow bụ njikọ ndị nwere "do" mkpado na usoro ha ma nyefee mmiri njikọ site na otu ebe nrụọrụ weebụ gaa na nke ọzọ. N'ụzọ ndị dị otú a, dofollow backlinks nke sitere na ụlọ ọrụ PR dị elu na-agafe ihe ngosi bara uru na isi njikọ, na-egosi Google ikike nke isi iyi a na uru ya maka ndị ọrụ.
Iji chọpụta ma ị ga-enweta backlinks dofollow ma ọ bụ, ị dị mkpa ka ị pịa ya ma họrọ nlele elele. Dịka ọmụmaatụ, koodu HTML nke dofollow njikọ dị ka Google, na Google na-ebu nkwa.
Backlinks Dofollow abawanye uru na okwu nke njikọ njikọ dị ka ha na-enyere saịtị gị aka ịkwado elu na nsonaazụ ọchụchọ ma nyere aka melite ikike ngalaba gị, ikike peeji nke na PageRank. Ọzọkwa, ha na-agwa engines ọchụchọ banyere ogo dị oke na mkpa nke ọdịnaya gị.
Ụzọ iji nweta backlinks dị elu free dofollow
Commentluv bụ ọkacha mmasị WordPress ngwa mgbakwunye na-eme ka gị njikọ dofollow na ihe na Commentluv Kwadoro blọọgụ. Ị nwere ike ịchọta blọọgụ dị otú ahụ site na iji akara ahịrịokwu dị na Google (dịka ọmụmaatụ - - "blogs blog comment", "" blogs blogs, "" mkpirisi achọrọ gị ebe a + blogs commentable, "na na.
Ị nwere ike ịmepụta backlinks dofollow kwesịrị ekwesị site na posts posts. Nke mbụ, ị ga-achọ ịchọta metụtara gị blọọgụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ forums nke na-enye ohere ka ndị bipụtara ndị ọbịa. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-akpọtụrụ onye nwe ụlọ blog ma jụọ ya banyere ịdebanye ọdịnaya gị na njikọ dofollow. Nyefee akwụkwọ ozi gị, na n'ime post gị, ị nwere ike jikọta ụfọdụ isiokwu ọhụrụ gị. Iji chọta blọọgụ ndị ọbịa blọọgụ na niche gị, ị nwere ike ịmepụta nyocha Google ma ọ bụ jiri usoro nyocha MyBlogGuest mee ihe.